Fil d'actualités du 19/02/2020
19/02/2020 - 08:30 : RAHARAHA TAHISY: Hiakatra fampanoavana anio ny raharaha nahafaty ity tovovavy vao 22 taona ity. Hohenoina avokoa ireo voakasika.
19/02/2020 - 08:00 : ANKADIMBAHOAKA: Nitrangana haintrano lehibe teny an-toerana androany vao maraina.
10/02/2020 - 17:30 : ITAOSY CITE: Mpanafika "Cash point" voahidy ao anatin'ny toerana notafihiny amin'izao fotoana izao. Andrasana ny tohiny.
29/01/2020 - 12:00 : GOVERNEMANTA: Anio tolakandro no hampahafantarina eny amin'ny Lapam-panjakana Iavoloha ny governemanta amin'ny endriny vaovao, taorian'ny fanovana rehefa avy nanao tombana ny Filoham-pirenena.
Archive du 20190410
Marc Ravalomanana “Nandefitra aho ho fisorohana ny ra mandriaka”
Tsy mbola afaka miteny firy izao satria tsy tapitra tanteraka ilay 100 andro. Rehefa tapitra dia tena hiteny aho, ary manomboka eo ihany koa ny fampielezan-kevitra ka ho avy aho,
Fanjakana manao bemarenina Ho taona fotsy ny eny Ankatso…
Efa efatra herinandro tsy nisy mpihaino sy mpiraharaha ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny SECES. Mikatso tanteraka ny anjerimanontolon’Antananarivo. Nihamafy ny fampikatsoana ny asa fampianarana omaly satria nikatona ny oniversiten’Ankatso, ENS Ampefiloha, Politeknika Vontovorona.
Andry Rajoelina Haharesy ny kolikoly marina ve ?
Efa nazava fa nisy hala-bato ny voka-pifidianana filoham-pirenena farany teo, izany hoe nisy kolikoly nivantana na an-kolaka. Ny tatitra savaranonandon’ny Vondrona Eoropeanina izao no nilaza fa nizara vola i Andry Rajoelina.
Famelabelarana nataon’ny HCC sy CENI Tsy afa-po ireo vehivavy kandida depiote
Saika nitovy hevitra avokoa ireo vehivavy kandida ho solombavambahoaka
Teknisianina, mpandraharaha avy any Betroka Hanova ny tantaran’ny distrika niaviany
Tena ratsy laza ny distrikan’i Betroka hatramin’izay. Dahalo foana no ao an-tsain’ny rehetra, hoy i Paolo Raholinarivo raha vao mahare ny anaran’ity distrika iray ity,
Ala honko eto Madagasikara Mahatratra 250 000 Ha
Nanomboka omaly talata 09 aprily tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina ny atrikasa maharitra 3 andro hifanampiana sy hifampizarana traikefa ny amin’ny fikirakirana ireo tarehimarika mahakasika ny ala honko (Mangroves).
Fanorenana tsy ara-dalàna eny Behoririka Ny kaominina no tokony hanohy ny fandravana, hoy ny ministera
Nitondra fanamarihana ny avy eo amin'ny minisiteran'ny fanajariana ny tany, ny trano fonenana sy ny asa vaventy mahakasika ny tohin'ilay fandravana ireo fanorenana tsy ara-dalàna teo Behoririka teo anivon` ny tranonskalam-pifandraisany omaly.
Halatra, hosoka, fisolokiana Vehivavy no maro an’isa manao ny asa ratsy
Vehivavy no betsaka tamin’ireo mpisoloky tratra hatreto. Lehilahy iray sy vehivavy telo izay mody manofa entana sady manao taratasim-panjakana sandoka no tafiditra tao anatin’ny
Fifidianana filohan’ny FMF vaovao Nokianin’ny minisitra ny ekipan’i Atallah Beatrice
“Raha ny resaka fifidianana izay ho filohan’ny FMF “Federasion’ny Baolina Kitra Malagasy”
ANS Ampefiloha Nahazo « Cyber » sy « Salle de musculation » vaovao
47 taona aty aoriana, sambany vao nisy fanavaozana tao amin’ny ANS « Academie Nationale des Sports » etsy Ampefiloha dia ny fampitaovana ny efitranon’ny mpianatra nahitana kidoro miisa 167 sy TV LED ecran plat miisa roa.
Mila mahazaka demokrasia
Nirarakopana ny valin-kafatra avy amin’ny fitondram-panjakana mahakasika ny dian’ny filoha tany ampitan-dranomasina, izay efa faninefany tao anatin’ny roa volana mahery nitondrana ity firenena ity.
Sahirana ara-bola ny fanjakana Roahina ny mpiasa, mifehy kibo ny ministera
Noresahina nanomboka teo amin’ny fitsanganan’ny governemanta tao anatin’izao fanjakana Rajoelina izao ny 23 janoary ny mahakasika ny politikan’ny fitsitsiana, antony nampihenana ireo mpikambana ho 22 raha 31 izay tany aloha.